onlineakhabar.com: यस्तो अनौठो शल्यक्रियाको तयारी, जहाँ एउटाको टाउको अर्कोलाई जोडिने !
Amazing News, Amazing World, China News, International, Main News, Viral News » यस्तो अनौठो शल्यक्रियाको तयारी, जहाँ एउटाको टाउको अर्कोलाई जोडिने !
यस्तो अनौठो शल्यक्रियाको तयारी, जहाँ एउटाको टाउको अर्कोलाई जोडिने !
इजिङ, २० भदौ ।
मानव अंग प्रत्यारोपण अन्तर्गत आँखा, मिर्गौला लगायतका अंग प्रत्यारोपण गरिनु सामान्य विषय हो तर चीनले मानव शरीरको मुख्य हिस्सा अर्थात् टाउको नै प्रत्यारोपणको तयारी गरेको छ ।
चिकित्सा विज्ञानमा यसलाई निकै महत्वाकांक्षी मानिएको छ । यसअघि अमेरिकामा बाँदरको शीर अर्को बाँदरमा प्रत्यारोपण गरिएको थियो । सन् १९७० मा भएको सो प्रत्यारोपणको केही दिनमै बाँदरको मृत्यु भएको थियो ।
चीनमा आगामी वर्षको सुरुवातमा मानव शीर प्रत्यारोपण गर्ने योजनाका साथ तयारी भइरहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । सबैकुरा सामान्य भएमा एक रुसी युवकको शीर अर्काको शरीरमा प्रत्यारोपण हुनेछ । मानव शीर प्रत्यारोपणको यो नै पहिलो घटना पनि हुनेछ ।
शल्यक्रियामा करिब ८० चिकित्सकको टोली रहने जनाइएको छ । (एजेन्सी)
Tags : Amazing News Amazing World China News International Main News Viral News